Hadalka: Beddel iibiyeyaasha emaylka adiga oo aan beddelin UI-gaaga! | Martech Zone
Markii aan ka shaqeynayay adeeg bixiyaha emaylka oo ah maamule badeecad, waxaan la yimid qorshe igu helay aniga xoogaa muuqaal yar oo gudaha ah. Waqtigaas waxaan haysanay wax yar oo horumariyayaal ah oo ka shaqeynayey annaga API maalin kasta waxaanan haysannay dhowr darsin oo ka shaqeynayay adeegsadeena isticmaale. Isku xirnaanta adeegsaduhu wuxuu ahaa malaayiin khadad koodh ah oo wuxuu naga ilaaliyay taageeradayada iyo miisaska maaraynta xisaabaadka maalintii oo dhan. Taa bedelkeeda, kaayaga API ayaa diraya emayl dheeri ah, mar haddii macaamilku kaco, marar dhif ah ayaan ka maqalnay iyaga markale.
Fikradayda? Dhis interface interface si aad u isticmaasho API ka dibna sii interface interface ka. Taasi waa sax… il furan oo keliya oo suuqa geli. Shirkaduhu ha u adeegsadaan wax kasta oo ay gooyaan oo ay doonayeen inta kalena ha ka saaraan. Shirkaddu way argagaxday waxaan la imaan lahaa qorshe sidan oo kale ah. Nasiib darrose, weligood ma aysan garwaaqsanayn in qiimaha ay keeneen ay ahayd dirista farriinta, oo aan la dhisin. Hadalka waa dhammaad-hore oo ku xiraya adeeg-bixiyaasha emaylka si caalami ah iyada oo loo marayo barnaamijkooda OngageConnect
OngageConnect ™ waa barmaamijka ugu horreeya ee suuqgeynta iimaylka adduunka oo ku xiran adeeg bixiyeyaal emayllo badan bixiya (ESPs). Tani waxay u oggolaaneysaa ururada inay si habsami leh u dhex maraan emaylladooda iibiyeyaal badan oo ka socda hal dhinac hore oo ku habboon. Sidoo kale waa suuq geyn iimayl ah dhamaadka-dhamaadka adeegyada gudbinta daruuraha SMTP. Faa'iidadaani waxay awood u siineysaa ururada awood u leh inay ka faa'iideystaan ​​awooda ESP-yada badan iyo isdhaafka SMTP, si loo wanaajiyo gudbinta emaylka loona kordhiyo waxqabadka suuqgeynta emaylka iyo ROI.
Iyada oo ku xidhan dalabaadkaaga, waxaad u diri kartaa emayllo jaban iyada oo loo marayo Amazon SES, adeegyada ku saleysan dariiqa SMTP, ama farabadan adeeg bixiyaasha emaylka. Qiimuhu waa qayb yar oo ka mid ah kharashka bixiyeyaasha kale - runti waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso!
Tags: emayl badanemaylka naqshadaEmail Marketingemail warsidboosteejada emaylkawarbixinta emaylkaemaylka isticmaalaha emaylkarahaamid
Naqshadaynta Ururka Suuq Geynta.
LocalVox: Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar iyo Kuwa Yar